နာမည်ကြီးရုပ်သံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ လိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး – Askstyle
နာမည်ကြီးရုပ်သံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ လိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
အဲ့ဒါကေတာ့ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအသုံးျပဳေနတဲ့ Application တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ iflix ကုမၸဏီကေန အေႂကြးရရွိရန္က်န္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာမွ်ေဝခဲ့တာပါ။
“Dear iflix! For the Debts you have to give me…you are still on my mind… Don’t you think I m done with u coz I’m on my vacation” ဆိုတဲ့အဂၤလိပ္စာသားေလးနဲ႔အတူ “ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ္ေၾကာင့္လူေတြကို စိတ္ဒုကၡမေပးခ်င္ဘူး… မထင္ထားတဲ့လူေတြက အဲ့လိုလုပ္တတ္တာလား… ဒါေပမယ့္ ကိုယ္မွန္ရင္ေတာ့ ေခါင္းငုံ႔ခံေနလို႔လည္း မရျပန္ဘူး..ျမန္မာျပည္ကလူေတြကို အဲ့လိုလာလုပ္လို႔ ရတာလားဟင္?” လို႔ေရးသားၿပီး မွ်ေဝခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တော်တော်များများအသုံးပြုနေတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် iflix ကုမ္ပဏီကနေ အကြွေးရရှိရန်ကျန်နေတဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာမျှဝေခဲ့တာပါ။
“Dear iflix! For the Debts you have to give me…you are still on my mind… Don’t you think I m done with u coz I’m on my vacation” ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသားလေးနဲ့အတူ “ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ကြောင့်လူတွေကို စိတ်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူး… မထင်ထားတဲ့လူတွေက အဲ့လိုလုပ်တတ်တာလား… ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှန်ရင်တော့ ခေါင်းငုံ့ခံနေလို့လည်း မရပြန်ဘူး..မြန်မာပြည်ကလူတွေကို အဲ့လိုလာလုပ်လို့ ရတာလားဟင်?” လို့ရေးသားပြီး မျှဝေခဲ့တာပါ။